You sụọla ngọngọ? | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụwo onye na-agụ ebe a nwa oge, ị maara nke ahụ Enwere m ịhụnanya na StumbleUpon. My blog na-aga n'ihu na-a ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọbịa site na Stumbleupon.
Dịka iwu n'ozuzu, ndị mmadụ achọghị ka ị kwalite ibe gị na saịtị dịka StumbleUpon. M nyefere m posts m n'oge gara aga - mana adịkarịghị. Ọ bụrụ na m chere na ọkwa ahụ bụ esemokwu ma ọ bụ nwee ike inweta nnukwu nlebara anya maka mmetụta ya, enwere m ike sụọ ngọngọ n'onwe m. Ma ọ bụghị ya, enwere m olileanya na ndị ọzọ ga-enwe mmasị na peeji ahụ ma nye ya mkpịsị aka.
Nke ahụ kwuru, ọ dịghị ihe dị njọ na ịlaghachi ma nye mkpịsị aka aka maka ibe ndị ọzọ sụrụ ngọngọ N'ime weebụsaịtị gị. Ọ bụrụ n’ịnwale ịchọ ngalaba ma ọ bụ weebụsaịtị n’ime StumbleUpon, ị ga - ahụ nyocha ha mara mma ma nwekwaa mkpado ndị ọrụ mejupụtara.
Akụkụ akụkụ: Ọ bụrụ na m bụ StumbleUpon, m ga-kpam kpam mejuputa ochicho Google dị ka isi nweta ego.
N'iji Google, ị nwere ike ịchọpụta nke ibe peeji gị ka ị sụọ ngọngọ ka ị wee nwee ike ịtụnye ntuli aka ọzọ! Maka blọọgụ m, m na - achọ:
saịtị: stumbleupon.com martech.zone
Nke a na-enye m ndepụta nke ibe m ndị ọzọ sụrụ ngọngọ ka m nwee ike ịkwado votu ọzọ. -Chọ ọdịmma onwe gị naanị? Ikekwe - mana m dabere na ntụziaka na ọ dị mma n'ihi na onye ọzọ ewerelarị ọnọdụ ahụ kwesịrị ka ọ sụọ ngọngọ.
Ọ bụrụ na ị nọ na StumbleUpon, kpachara anya tinye m dika enyi.
Dee 31, 2008 na 11: 27 AM
Daalụ maka post a. Agbalịrị m ime nke a tupu oge ahụ mana enwetaghị m syntax Google ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma ị ziri ezi; StumbleUpon kwesiri imeziwanye ikike ochicho ha. Echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na StumbleUpon ga-ekwe ka ị kwuo blọọgụ nke gị ka ị nwee ike ịdenye aha mmelite oge ọ bụla mmadụ sụrụ ngọngọ otu n'ime saịtị gị.
Google achoputaghi peeji nile na saiti m nyefere na SU.
Dị ka gị, ekwenyesiri m ike na SU ka ọ na-eme ka ọnụọgụ ahịa kachasị na blọgụ m.
Jenụwarị 2, 2009 na 3:13 PM
Naanị m debanyere aha maka akaụntụ n'ihi na onye ọ bụla na-ekwu ya nnukwu ụzọ iji bulie okporo ụzọ. Anọ m na-agagharị na profaịlụ m ma nwee nsogbu ibido, ọ dị ka ọ bụ obere ọgba aghara. You na-akwado ntuziaka ọ bụla ka ịlele ma gụọ ka ọ kacha mma ịmalite ma mụta otu esi arụ ya?
Nov 3, 2009 na 10:09 PM
Daalụ, syntax google gị bara ezigbo uru. Ọ dị ka m nwere obere post na SU, na-ahụghị okporo ụzọ 🙁
Nov 4, 2009 na 4:00 AM
Iji jiri StumbleUpon mee ihe n'ezie, gbaa mbọ hụ na ị ga-adaba ebe ahụ ma jiri ya ugboro ole na ole kwa izu iji nweta saịtị ị ga-ada. Ozugbo iwulite ezigbo profaịlụ, ekwenyere m na mmetụta gị ga-akawanye mma. Emela ka ị sụọ ngọngọ na saịtị gị! Agaghị eleghara nke ahụ anya.